कला/साहित्य Archives - Harekpal
गायिका आस्था राउतलाई पक्राउ गर्न अनुमति जारी
फूलजस्तै कविताको कथा
काठमाडौं, ५ माघ । अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा गायिका आस्था राउत पक्राउ पर्ने भएकी छिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गायिका राउतलाई पक्राउ गर्न अनुमति जारी गरेको छ । यसअघि प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको छ । प्रहरीले राउतलाई फरार अभियुक्तको सूचीमा राखेको छ । राउतले बधुबार त्रिभुवन […]
काठमाडौं, ५ माघ । सन् १९७० अर्थात् ०२७ तिर प्रेमध्वज प्रधान मुम्बईमा थिए । चर्चित संगीतकार मनोहर सिंहसँग संगत थियो । मनोहरले सुझाब दिए– गीति एल्बम निकाल्नुस् । रहर त थियो, तर उनीसँग पर्याप्त लगानी थिएन । दुःख गरेर पैसाको जुगाड गरे । मनोहरले नै म्युजिक एरेन्ज गरिदिए । यसरी १० गीतको एल्बम तयार भयो । २४ वटा कपी बोकेर प्रेमध्वज काठमाडौं […]
कृति परिचय ललितपुर जिल्लाको प्राकृतिक एवम् रमणीयस्थल गोदावरीमा वि.सं. २०२६ सालमा माता सरलादेवी र पिता पं. जगन्नाथको कान्छा छोराको रूपमा जन्मनु भएको ऋषभदेव घिमिरे सामाजिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा समर्पित हुँदै २०४२ सालदेखि विभिन्न साहित्यिक संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँले आफू जन्मिएकै ठाउँ गोदावरीमा लाग्ने प्रसिद्ध बाह्रवर्षे मेलाको धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिचयात्मक विषयमा गोदावरी शिर्षकको […]
कथासाहित्य र सृजनात्मक समीक्षाको नयाँ प्रतिमान
सिर्जना जीवनसित जोडिएको निरन्तर प्रक्रिया हो भने समीक्षा सिर्जनाको मूल्याङ्कन जुन साहित्यको उद्भव र विकास–प्रक्रियाबीच कुनै समय कुनै अन्तर्भूत आवश्यकताका कारण उब्जिएको हुनुपर्छ ।
खलील जिब्रानका दुई लघुुकथा
कविता एथेन्सको राजमार्गमा दुईजना कविको भेट भयो । भेटेर दुवै खुसी भए । एउटा कविले अर्कोलाई सोधे, “नयाँ केही लेख्नुभएको छ कि ?” अर्का कविले गर्वसाथ भने, “भर्खरै एउटा कविता लेखेको छु, जुन मेरा रचनाहरूमध्येकै राम्रो हो । मलाई लाग्छ, ग्रीकमा लेखिएका जति पनि कविता छन्, ती सबैभन्दा यो उत्कृष्ट हो । यो कविता मैले […]
विराटनगर बम काण्ड
पुस्तक : ओखलढुङ्गा सशस्त्र क्रान्ति : पृष्ठभूमि, कारण र परिणाम विधा : इतिहास लेखक : विनोद दाहाल प्रकाशक : सगरमाथा वाङ्मय प्रतिष्ठान (प्रस्तुत अंश ‘ओखलढुङ्गा सशस्त्र क्रान्ति : पृष्ठभूमि, कारण र परिणाम’ कृतिबाट साभार गरिएको हो । आठ खण्डमा विभाजित यस कृतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापनाको पृष्ठभूमि, २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिदेखि लिएर ओखलढुङ्गाको सशस्त्र क्रान्तिका घटनाहरूलाई […]